Erdogan:Hadii Berlin ay doonayso inay la baxdo ciidankeeda waxaan leenahay "nabad galyo" - Horn Future
Ankara(Reuters)- Madaxweynaha Turkey Rajap Dayyip Erdogan ayaa sheegay in haddii Germany go’aansatay ciidamadeeda inay kala baxdo saldhiga cirka ee “Incirlik”, in dalkiisu ka odhan doono iyaka “nabad galyo”.
Erdogan oo ka hadlay magaaladda Ankara ka hor intii uunan socdaalin Brussels si uu uga qayb galo shir madaxeedka ururka (NATO) iyo kulanka madaxda Midowga Yurub,ayaa sheegay in Turkey aynan ka helin tilmaam ku saabsan suurtogalnimada ka bixitaanka Berlin ee ciidamadeeda ku sugan xarumaha saldhiga ciidamada Cirka ee koonfurta Turkey.
Waxa mustaqbalka ciidamada Germany ee saldhiga cirka ee “Incirlik” uu noqday mid tuhun soo galo kadib markii Turkey ay ka hor-joogsatay xildhibaano Germany ka socda inay booqdaan ciidamada bishan,taas oo ku riixaysa Berlin inay ku fikirto suurtogalnimada in ciidamadeeda meelo kale ay u wareejiso.
Waxa ku sugan saldhiga cirka ee “Incirlik” ku dhawaad 250 askari oo katirsan ciidamada Germany kuwaas oo ka qeyb qaadanaya dagaalka lagu hayo ururka ISIL ee qaybta ka ah isbahaysiga hormoodka u yahay Mareykanka.
« Ex-Trump official to face House subpoenas: report	» Qarax gaystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay caasimada Jakarta ee dalka Indonesia